Nagu saabsan | Shijiazhuang Senlai Import iyo Dhoofinta ganacsiga Co., Ltd.
Shijiazhuang Senlai Import iyo Dhoofinta ganacsiga Co., Ltd. oo la aasaasay 2012, waxay ku taalaa Shijiazhuang City, Gobolka Hebei. Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo dharka carruurta ah, alaabtu waxay la kulmaan shahaadada oeko-tex 100 heerka 1.
Shirkaddu waxay leedahay fikradda naqshadeynta horumarsan, tikniyoolajiyadda wax soo saarka wanaagsan iyo kooxda shaqaalaha xoogga leh. Waxay caan ku tahay sumcad iyo sumcad weyn suuqa caalamiga ah, waxaana si fiican loogu iibiyaa waqooyiga Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Shirkaddu waxay u qaybsan tahay waaxda ganacsiga, waaxda maaraynta nidaamka, waaxda wax soosaarka muunada, waaxda wax iibsiga dharka, waax kasta waxay leedahay qayb adag oo cad oo shaqada ah, dharka dharka, qalabka, badhanka iyo dhinacyada kaleba si adag ayaa loo xakameeyaa, tayada wanaagsan ayaa ah noogu hore. cayrsasho.
Shijiazhuang Senlai Import iyo Dhoofinta ganacsiga Co., Ltd., oo la aasaasay 2012.
Awoodda wax soo saarkeennu waa in ka badan 200000 xabbo bishii.
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo dharka carruurta ah, alaabtu waxay la kulmaan shahaadada oeko-tex 100 heerka 1.
Waxaan marwalba u hogaansanahay "sharaf, guul-guul, hal-abuurnimo, waxqabad" ujeeddo ganacsi.
Shijiazhuang Senlai soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Co., Ltd. badeecadaha ugu waaweyn waa koodhadhka carruurta, bacda jiifka ilmaha, dharka ilmaha iyo dharka cusub ee carruurta. Awoodda wax soo saarkeennu waa in ka badan 200000 xabbo bishii. Shirkaddu waxay leedahay shaqaale naqshadeysan oo xirfadlayaal ah, shaqaale dhar soo iibsi dhar ah, shaqaale wax soo saar muunad xirfadeed leh. Shaqaalaha soosaarka dharka ayaa leh waayo aragnimo shaqo sanado badan oo guddiga dharka ah, aqoon u leh astaamaha qalabka kala duwan ee dusha sare ee dharka, bartaan shuruudaha alaabooyinka kala duwan iyo maryaha qaabka. Aqoon u leh nooc kasta oo samaynta saxanka dharka, dejinta habka, qaabka iyo cabirka, dejinta caadiga ah iyo habka wax soo saarka, oo dhameystiri kara soo-saarka muunad kasta oo naqshadaysan iyadoo loo eegayo shuruudaha naqshadeeyaha. Waxaan ganacsi la sameynay shirkado badan oo ajnabi ah. Iyada oo ah nooc ka mid ah nashqadeynta dharka, wax soo saarka, adeegga mid ka mid ah ganacsiyada dharka xirfadeed, waxaan had iyo jeer u hoggaansamnaa "sharaf, guul-guul, hal-abuurnimo, waxqabad" ujeeddo ganacsi. Waxaan rajeyneynaa ganacsi saaxiibtinimo leh shirkado badan oo dharka sameeya.
Macaamiisheena waxaa badanaa lagu qaybiyaa waqooyiga Yurub iyo Yurub. Tusaale ahaan, Denmark, Finland, Norway, Iceland, Germany, France, Japan iyo meelo kale. Cimilada, cimilada iyo sababo kale awgood dalalkan awgood, waxay aad ugu habboon yihiin nooca dharkeenna. Dabcan, Shijiazhuang Senlai soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Co., Ltd. waxay ku soo dhaweyneysaa macaamiisha adduunka oo dhan inay wax weyddiiyaan, waxaan ku siin doonaa adeeg qanciya.
Iyada oo ah nooc ka mid ah nashqadeynta dharka, wax soo saarka, adeegga mid ka mid ah ganacsiyada dharka xirfadeed, waxaan had iyo jeer u hoggaansamnaa "sharaf, guul-guul, hal-abuurnimo, waxqabad" ujeeddo ganacsi. Waxaan rajeyneynaa ganacsi saaxiibtinimo leh shirkado badan oo dharka sameeya.